Version 0.9.7.0 – Fixes na atụmatụ gburugburu, na SuperProxy alpha
June 6, 2015 site na rịọ 2 Comments
New version bụ ebe a!
Biko nweta nkwalite! Biko, Biko nweta nkwalite! Ime na ụfọdụ sugar n'elu.
Gịnị mere ị ga-nweta nkwalite?
Nke a version fixes na Google proxy nkwado, nke pụtara na akpaghị aka Google Translation ga-arụ ọrụ ọzọ.
Nke a version mmelite na nchekwa data format, nke pụtara wordpress 4.2 na-akwado, na ị na-atụ anya ịzọpụta ~ 40% nke ugbu a table size
Anyị mechara nwere onye mbụ version nke a backend translation nchịkọta akụkọ, ọ ga-egosi na ị na urụk ndị mmadụ n'ezie sụgharịa na-ekwe ka ị ngwa ngwa nyochaa ma hichapụ ndị.
Olee otú i kwesịrị nweta nkwalite?
Na ụfọdụ chi, ị nwere nhọrọ nanị nweta nkwalite gị wordpress dashboard. Ọ na-atụ aro ka ị ndabere, dị ka e nweghị ụzọ azụ mgbe na nchekwa data kwalite dechara.
Ọ bụla quirks, mbipụta, nsogbu – na kpọtụrụ anyị na-etolite bụ enyi gị.
Gịnị bụ na SuperProxy na ihe mere i kwesịrị inwe ike a?
SuperProxy bụ ọhụrụ anyị “Get ọgaranya ngwa ngwa” atụmatụ. Hmm…
N'ezie, anyị na-eji ọgwụgwụ ọnụ na-ekwe ka ụlọ ọrụ na ndị mmadụ na-enwe na-ekesa ohere ka web. Anyị ga-akwụ ụgwọ maka nke a okporo ụzọ, ma ọ bụrụ na ị zụta a Bochum ozi ma na ị nwere tọn data nyefee na ị na-adịghị eji, anyị ga-aghọta nnọọ na ị nwee nke a mma, ọ ga na-akwado anyị ma na-ga-eleghị anya-abara gị uru. Anyị ga-ebipụta nkọwa ndị ọzọ banyere nke a dị ka ha na-aghọ dị.
Na – ka ndị fọdụrụ nke changelog:
Woo mwekota fixes
Okporo mmiri ahụ base64 ngbanwe na belata size nke translatable peeji nke
Wijetị fixes na-eme ka flags egosi n'ụzọ ziri ezi mgbe ọjọọ igbe sizing e ji
Mwepụ nke n'ihu ọgwụgwụ ọganihu mmanya, ọ adịkarịghị hụworo ma ọ bụ na-eji ma mee ka ndị ọzọ nsogbu karịa ọ bụ ọnụ ahịa
3 asụsụ ọhụrụ na-akwado site Bing
anọkwaghị n'ógbè shortcode IG
zere translation nke na-abụghị ederede / json ọdịnaya fixes mbipụta na ụfọdụ download addon plugins
Akwado placeholder àgwà, ekele Mark Serellis
Ụfọdụ na-akwado azụmahịa ndekọ plugin
Ya mere, – Obi ụtọ a na version, na adịghị ịbụ onye ala ọzọ, ka anyị mara otú ọ na-arụ ọrụ gị.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: google ntụgharị, obere, tọhapụ
Version 0.9.3 – Olee ebe m na-aga ọkọlọtọ?
Ike 10, 2013 site na rịọ 40 Comments
Ha na-aga n'ebe dị nnọọ anya, biko oge a video ma ọ bụ gụọ ntụziaka n'okpuru.
Gịnị ka i kwesịrị ime iji nweta ha azụ?
Dị nweta nkwalite ndị zuru version na iji ntuziaka:
Nweta nkwalite ndị ọhụrụ version si wordpress.org (nke ga-ikpeazụ, e nwere)
Lelee “ekwe ka kwalite ka zuru version” na ntọala
Ịlele maka upgrades na ebi kwalite, nke ahụ bụ ihe niile!
Kedu ihe ọhụrụ na version 0.9.3:
Mmelite ga na-arụ ọrụ anyị na saịtị
Ụfọdụ ebe fixes
Ike iwepu rel = ọzọ nke bụghị mgbe niile bara uru
(0.9.3.1) Anyị a tọhapụrụ a Sub version na incorporate ọhụrụ asụsụ na-akwado Google, na-eme ka anyị na ngụkọta ọnụ – 73! (Ọ bụrụ na onye ọ bụla a na-ekwu okwu Hmong, biko kpọtụrụ anyị)
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a version.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: zuru version, obere, tọhapụ, video, wordpress.org
Version 0.9.2 – 4 afọ anyị anaghị agbaji
March 11, 2013 site na rịọ 3 Comments
Anyị na-eto 4 (n'ezie 5) tulips anyị ncheta
Ee, ọ bụ ihe karịrị afọ anọ ebe ọ bụ na nke mbụ version nke Transposh maka WordPress tọhapụrụ. Ma n'ezie, anyị bịa nnọọ ogologo ụzọ.
Transposh a na-eji ọtụtụ puku na saịtị niile web, ma anyị nwere ọtụtụ ndị na-enwe obi ụtọ ọrụ (na a ole na ole na-erughị obi ụtọ 🙂 ).
Nke a na version, 0.9.2, abụghị n'ezie ihe anyị na-atụ anya ka nwere ugbu a, mgbe afọ anọ anyị na-ga-atụ anya na a version otu (ma eleghị anya ọbụna abụọ) ga-ama na e wepụtara. Ma, o doro anya na, ndụ ke adịkarịghị gaba ka ị na atụmatụ ya.
Aha a posts n'eziokwu na-ezo aka ọhụrụ omume anyị parser, mgbe anyị na-enwe ihe &nbsp; (o kwesịrị ịbụ onye na-abụghị na-agbasa ohere) anyị n'ezie nkuwa okwu ahụ abụọ, nke kama kpọmkwem abụghị ihe ihe kwesịrị ndidi. Ya mere, Olileanya a ugbu a ofu, anyị Aga agaghịkwa agbaji!
Ndị ọzọ na-agụnye mgbanwe:
Ndesịta akwado Woocommerce mwekota
Akpagbu ahụ mgbe ndị ọzọ plugins ma ọ bụ gburugburu mee ka process_page a ga-akpọ nká
Idozi a mkpari ahụhụ mgbe otu translation pụtara na paragraf nke ihe karịrị otu ugboro
Bing nwekwuru abụọ asụsụ
Ọkọk ahụhụ kọrọ site na dserber disallowing asụsụ nhọrọ na post ebe translate_on_publish nwere nkwarụ
Melite maka. PO faịlụ, Turkish Translation site Ömer Faruk Khan
Ị ga-enweta ihe a version! Nke a bụ iji! 🙂
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi, Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, ọmụmụ, obere, Parser, tọhapụ
Version 0.9.1 – Rụọ ọrụ mgbe niile
January 23, 2013 site na rịọ 4 Comments
Translation Da Ndị Ọnụ
Kwesịrị gwa mbụ banyere 0.9.1 nke a kama dị mma version ụfọdụ mara mma ndozi. Ma anyị chere nke a di mma nke nzubandu, mere na Fiverr site na onye na-eju animator, na-eme ka ya site na ọbara ka na otu ebe a 🙂
Anyị nwekwara kere ọmarịcha Ngwaọrụ osisi na peeji nke, dị na-aga ma na-ahụ!
Gbakwunyere na ụfọdụ enyemaka n'ime ha interface nke ukwu ọsọ ajụjụ (igodo – mba, ị chọrọ igodo dịka nke ndabara)
Kwe Ka jQueryUI version na-overriden, idozi ọtụtụ esemokwu (ochie gburugburu, niile na ụdị mmiri na unsorted nsụgharị nke jQuery na jQueryUI)
A fix mgbe ụfọdụ ihe ọjọọ plugins Ịfanye. Css ke-ekwesịghị ekwesị n'ụzọ (nke a nwere nkwarụ ike ịhụ nke asụsụ na-selecred)
Gbakwụnyere transposh_echo ọrụ – ịhụ anyị na mmepe na saịtị maka akwụkwọ na ojiji
Fixes maka wijetị, mfe Nsonye na shortcodes, ochie dropbox fixes, NJ wepụ
Na-agbakwunye ase ntụmadị ka ha, ikwe asụsụ nhọrọ na aka ngwaọrụ
Fixes maka obere okwu chọpụtara ebe ọ bụ na 0.9.0
Kedu ihe ị na-eche maka? Download ọhụrụ version ugbu a,!
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: obere, tọhapụ
Version 0.9.0 – Njikere, ntọala, na-aga!
December 12, 2012 site na rịọ 9 Comments
Na 12/12/12 (ihe mîkemeke ụbọchị) na 20:12 (ihe oge kwesịrị ekwesị). Anyị a tọhapụrụ version 0.9.0 anyị ngwa mgbakwunye. Nke a na version gụnyere isi ideghari anyị ntọala na ochichi na peeji nke. Akpụ akpụ site na otu ukwu ogologo na peeji nke na-na na na na ọtụtụ nhọrọ na na na tabbed interface.
Nke a na nsụgharị abụghị nanị na ịchọ mma ma ọ gụnyekwara abụọ isi atụmatụ nyeere site na ntọala ọhụrụ elu taabụ:
1. Nsonye nke debugging nkwado: Ugbu a, anyị ga-enwe ike inye gị mma support iji ngwa mgbakwunye ike ike ndekọ, na-ekwe ka ndị dịpụrụ adịpụ debugging.
2. Advanced parsing iwu: A mma-enye gị ohere ịgbanwe otú ihe odide na-agbaji nke translation gị na saịtị. Ọ na-enye ohere a ukwuu finer granulation ma daba adaba na ndị engine gị kpọmkwem eji ikpe.
Otú ọ dị – a dọrọ aka ná ntị, ndị atụmatụ, ọ bụ ezie na mma na-anwale na-akara dị elu ma mere. Jiri ha ma ọ bụrụ na ị na-aghọta ihe ị na-eme.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ na atụmatụ na ahụhụ fixes gụnyere, na ọtụtụ n'ime ha kwesịrị ka ha post, ma ugbu a,, na-ekwe ka na-aga n'elu mgbanwe log:
* A asụsụ ọhụrụ nhọrọ wijetị dabeere select2 (Dị mma nke ukwuu họrọ igbe dị na ọkọlọtọ)
* Gbakwunyere na Ctrl mkpịsị ugodi nke ngwa igodo nke gara aga / na-esote blocks (Mma ọsọ nke na-arụ ọrụ na interface)
* Ọhụrụ nhọrọ na-enye ohere iji tọgharịa na nhazi faịlụ ndị recommanded defaults
* Css fixes nke iri abụọ na iri na abụọ isiokwu
* Zere loading na subwidgets ke ha ibe
* Wepụ iche n'etiti editable na viewable asụsụ, ugbu a, a asụsụ pụrụ nanị ịbụ nọ n'ọrụ ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ
* Na-emelite jQueriUI na 1.9.2 (jQuery kwesịrị ugbu ibu 1.6+)
* Fixes ahụ z-ndeksi nke ochie ịke dropdown (ịmachi site chemaz)
* Fixes ahụhụ ahụ na njikọ nke Chinese mfe ma omenala
* Idozi ahụhụ igbochi nweta nkwalite site na ukwu agadi nsụgharị
* Imegbu ọkwa mgbe wijetị na-kere n'onwe anyị ọrụ
* Zere rewriting urls ke ndabara asụsụ, tumadi karị canonicals
* Anyị edemede dị mkpa mgbe wijetị na-enye ohere ntọala nke ndabara asụsụ
* N'ikpeazụ, dozie nsogbu na MSN ịsụgharị ma nile / LF
N'oge na-eso mbụ tọhapụ, atọ chinchi e ekwuchi na ofu, ma ọ bụrụ na ihe dị mfe na-adịghị arụ ọrụ, jide n'aka na ume gị na faịlụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: 0.9, bugfix, debug, isi, Parser, tọhapụ